HUAWEI Mobile Services (HMS) ဆိုတာဘာလဲ? Google မရှိလည်း အိုကေပဲလား?
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ဘာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်လဲ? ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်တော်တို့ ဖြေရမယ်ဆိုရင် Processor ၊ ကင်မရာ ၊ ဘက်ထရီ ဘာညာပေါ့၊ ပြီးသွားရင် OS ၊ A.I နဲ့ အခုပြောထားတဲ့ GMS (Google Mobile Services) ၊ HMS (Huawei Mobile Services) တို့ နောက်ကလိုက်တာပေါ့။
တစ်ဆင့်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးရရင် Snapdragon ၊ Kirin Processor တွေနဲ့ Leica Lens ၊ Sony ၊ Samsung Sensors ၊ RAM ၊ Storage ဒါတွေအားလုံးက Hardware လို့ ပြောနိုင်တယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မြင်လွယ်အောင် ကျုံ့လိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်ပြီး ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ Hardware Unit အကုန်လုံး ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ နောက်ကနေ ပံ့ပိုးထားတဲ့ OS ဒါမှမဟုတ် Software ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Kirin SoC (Image: Executive Bulletin)
ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မှတ်ယူနိုင်တာက ဖုန်းတစ်လုံးမှာ Hardware ၊ Software ၂ မျိုးလုံး အရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ ဖုန်းမော်ဒယ် မြင့်ရင်မြင့်သလို အသုံးပြုထားတဲ့ Hardware တွေကလည်း အလန်းတွေချည်းဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေအမြင်မှာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။
ဒါကိုတော့ ကန့်သတ်ချက်လို့ ပြောရမယ်ပေါ့။ နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဖုန်းတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Android OS ပေါ် မှီခိုနေရတယ်။ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က iPhone အသုံးပြုသူတွေ ဖြစ်ကျပေမယ့် အများစုက Android ကို နှစ်ခြိုက်ကျတယ်။
ဖုန်း Brand တွေထဲမှာလည်း ကင်မရာ ကောင်းတဲ့ဖုန်း ၊ စွမ်းဆောင်ရည် မိုက်တဲ့ဖုန်း ၊ ဒီဖုန်းကတော့ Software ပိုင်းမှာ Optimize ဖြစ်တယ်၊ Battery ခံတယ်စသဖြင့် ပြောနေကြတာ နောက်ကွယ်က Software လုပ်ဆောင်ချက် မြင့်မားလို့ပါ။
အထူးသဖြင့် HUAWEI ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ Mate 30 စီးရီး P30 စီးရီးတွေဟာ Leica Lens ပေါ်မှီခိုတာထက် A.I (Artificial Intelligence) အားသာချက်တွေနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလာဒ်တွေ ရရှိနေတာပါ။
ဒါကတော့ မိုဘိုင်း Photography ပိုင်း ခရေဇီ သမားတွေဆိုရင် HUAWEI ၊ Pixel ဖုန်း ရိုက်ချက်နှစ်ခြိုက်ကျသလို Software လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုထဲနဲတင် ကျေနပ်တဲ့ရလာဒ် ပေးစွမ်းနိုင်တာကို သဘောကျကြတယ်။
ဒီလိုပဲ OS ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ System Optimization ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်း Software နည်းပညာတွေ ထည့်သုံးလာကြတယ်။ အခုလို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အနေထားတစ်ခုကို ရောက်နေချိန် HUAWEI စမတ်ဖုန်းတွေမှာ Google Mobile Services (GMS) မရတော့တာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်တော် အခုလို အရှိန်ယူပြီး ပြောလာတာ GMS တစ်ခုထဲနဲ့ EMUI လုပ်ဆောင်ချက် ကျလာမယ်၊ Google မရှိရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး ဆိုတာမျိုး မရောက်သွားဖို့ နိဒါန်းပျိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
GMS အကြောင်းပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Gmail ၊ YouTube ၊ Google Maps နဲ့ Chrome Browser အစရှိတဲ့ Google ထုတ်ကုန်တွေအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလို့ ပြောချင်တာပါ
အမေရိကန် အစိုးရဖိအားကြောင့်သာ Google Services အသုံးပြုခွင့်မရတော့တဲ့အတွက် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ နောက်ပိုင်းထုတ် HUAWEI စမတ်ဖုန်းတွေမှာ GMS ပါမလာတော့ပါဘူး။
ထပ်ပြောရရင် Google Ecosystem ထဲက ထွက်ခွာလိုက်ရပေမယ့် ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက် ၊ ဘက်ထရီခံတဲ့ HUAWEI ဖုန်းတွေဟာ GMS မရှိလည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ Hardware တွေနဲ့ ရပ်တည်နေဦးမှာပါ။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ GMS ကို အခြေခံထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းချက်ထားပေးလဲ?
HUAWEI Extended with it’s own Ecosystem
အလွယ်ကူဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ GMS Ecosystem လိုပဲ Apps နဲ့ Games တွေကို သီးသန့် အသုံးပြုနိုင်မယ့်နေရာ ရှိပါတယ်။
ဆိုတော့ အနာဂတ် HUAWEI ဖုန်းတွေရဲ့ ကျင်လည်ရာ Ecosystem က ဘာဖြစ်မလဲ? စာဖတ်သူတွေ သိထားပြီးတဲ့အတိုင်း HUAWEI Mobile Service လို့ခေါ်တဲ့ HMS ဝန်ဆောင်မှုပါ။ ဒါဆိုရင် ဘာခေါင်းစဥ်တွေ အကျုံးဝင်နေလဲ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့။
ဖုန်းတစ်လုံးမှာ Hardware ၊ Software (OS) အရေးပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်ကိစ္စအတွက် စာပို့ချင်တယ် ဥပမာ email သုံးမယ်ဆိုပါစို့၊ GMS မှာ ဒီစနစ်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အရံသင့်သုံးနိုင်တယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာက YouTube ၊ Facebook ၊ Instagram တွေ သုံးမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးတွေပါပဲ။
HUAWEi Mobile Services (HMS) နဲ့ ဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
ဒိအတွက် HMS မှာ YouTube ကြည့်နိုင်မယ့် Default Browser ပါဝင်ထားပြီး တကယ်လို့ Social Apps တွေ ဂိမ်းတွေကစားချင်တယ်၊ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ တခြား Apps တွေသုံးချင်တယ်ဆိုရင် AppGallery ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ OS တစ်ခုရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Cloud ဝန်ဆောင်မှု၊ ပြီးသွားရင် Entertainment ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ Music ၊ Video Player တွေကို တသီးတသန့် အသုံးပြုလာနိုင်မယ်။
ဒိထဲမှာ Themes ပြောင်းတာအစ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Mobile Banking နဲ့ Telecom Operator App တွေကိုပါ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ App ရှိမနေဘူးဆိုရင် 3rd Party တွေကနေ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ မသိသေးရင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာက ဖုန်းမှာပါဝင်ပြီးသား (HMS) ClonePhone ကနေ တခြားဖုန်း ၊ ဖုန်းဟောင်းတစ်လုံးကနေ Mirror Copy လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ်။
HUAWEI ဖုန်းအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ ပါပြီးသား Phone Clone နဲ့အတူ အရင်ဖုန်းထဲက သုံးနေကျ App တွေပြန်ကူးနိုင်တဲ့ အပြင်၊ Contact တွေ၊ Call List တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ Message တွေကအစ ကိုယ် Block လုပ်ထားတဲ့Contact List တွေအထိပါ ဖုန်းအသစ်ထဲရောက်အောင် ပြန်ကူးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယကတော့ 3rd Party ဖြစ်တဲ့ APKPure ၊ APK Mirror ဆီကနေ အသုံးပြုချင်တဲ့ App ကို Download ဆွဲ ထည့်သုံးနိုင်တယ်။
တတိယတမျိုးကတော့ AppGallery မှာ Wish List လုပ်ပြီး Official Support ရတဲ့အထိ စောင့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Mate 30 စီးရီး မိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကစလို့ HUAWEI Mobile Services ကိုပါ ကြေညာခဲ့ပြီး 3rd Party Apps တွေ အသုံးပြုနိုင်မယ့် AppGallery ကိုပါ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
AppGallery ဆိုတာကတော့ သီးသန့် Market တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်သလို Samsung နဲ့ iPhone တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Galaxy Apps ၊ App Store တွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။
သက်ဆိုင်ရာ Developer တွေ ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Apps မှန်သမျှ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Exclusive Content ဖြစ်တဲ့ Gifts ၊ In-game events တွေနဲ့ ဆုတွေကိုပါ AppGallery ကနေ ရရှိနိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် GMS မရှိလို့ Google ထုတ်ကုန်တွေ မသုံးနိုင်ဘူးဆိုမယ့် HUAWEI/Honor ဖုန်းတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ AppGallery က It’s just fine လို့ ပြောနေသလိုပါပဲ။
တဖက်အစိုးရကြောင့်သာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း အသုံးပြုခွင့်မရတာ ဖြစ်ပေမယ့် HUAWEI ကတော့ အောင်မြင်မှု ရနေဆဲပါ။
လက်ရှိအချိန်မှာ Apple ကို ကျော်တက်ပြီး ဒုတိယ အကြီးဆုံး စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာသလို တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ် ၁၀ မျိုးထဲမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခံရတဲ့အတွက် GMS မရှိလည်း ရပ်တည်နိုင်တာကို ထောက်ပြနေသလိုပါပဲ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ HUAWEI စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ အမြင်ကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်
6.39” IPS Display (269 PPI) HUAWEI Punch FullView Display (720 x 1560 Resolution)
Kirin 710F SoC (Android9Pie with EMUI 9.1.1)
4G RAM ၊ 64GB Storage (Upgradable to 512GB)
Back Cameras – 48MP (f/1.8) Main Sensor ၊ 8MP (f/2.4) Ultra-wide နဲ့ 2MP (f/2.4) Depth Sensor
Front Camera – 8MP (f/2.0)
4,000 mAh Battery တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်မယ့်အရောင်တွေကတော့ Aura Blue နဲ့ Midnight Black တို့ပဲဖြစ်ပြီး HUAWEI Y7p ကို မြန်မာငွေ ၂၂၉,၉၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
၄ သိန်းဝန်းကျင် ကျသင့်မယ့် HUAWEI nova 7i မှာ ဘာတွေ ထူးခြားနေလဲ?
၂ သိန်းအောက် Budget King စမတ်ဖုန်း မိတ်ဆက်ဦးမယ့် realme